ငှက်ပျောသီး အခွံ အသုံးချနည်း – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၀၂. ဖိနပ်ကို ပြောင်အောင်တိုက်နိုင်တယ်။ ငှက်ပျောခွံမှာပါတဲ့ Kalium ဓါတ်ကြောင့် သရေဖိနပ်ကို ပြောင်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။
၀၃.ဒဏ်ရာကို သက်သာစေတယ်။ ထိခိုက်မိလို့ရတဲ့ ဒဏ်ရာအညိုအမဲတွေကို အနည်းငယ်သက်သာစေ ပါတယ်။
၀၄. သွားတွေကို ဖြုစေပါတယ်။ သွားတိုက်ဆေးနဲ့သွားမတိုက်ခင်မှာ ငှက်ပျောသီးအခွံနဲ့ သွားတိုက်ကြည့်ပါ။ ၁လလောက်ကြာရင် သွားတွေ ဖြုလာကောင်းဖြုလာပါလိမ့်မယ်။ ငှက်ပျောသီးအခွံမှာပါတဲ့ Mineral ဓါတ်ဟာ သွားမှာကပ်နေတဲ့ သွားချေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
၀၅. အသားကင်တဲ့အခါ ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အသားကင်တဲ့အခါမှာ ဒယ်အိုးထဲမှာ ငှက်ပျောခွံထည့်လိုက်ရင် အသားတွေကို ပျော့စေပါတယ်။
၀၆. နဖူးပေါ်မှာတင်ပြီး ပွတ်ပေးရင် ခေါင်းကိုက် သက်သာတယ်။ နဖူးပေါ်မှာ ငှက်ပျောခွံတင်ထားရင် ခေါင်းကိုက်သက်သာစေတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
၀၇. အစူး၊အရိုး စူးတဲ့အခါ ငှက်ပျောခွံနဲ့ အုပ်ထားရင် သက်သာတယ်။ အစူးစူးတဲ့နေရာကို ငှက်ပျောသီးအခွံနဲ့ မိနစ် ၃၀ ကနေ ၁ နာရီလောက်ကပ်ထားရင် အနာပတ်ဝန်းကျင်က အသားကနူးလာပြီး အလိုလိုထွက်လာ တတ်ပါတယ်။ လက်ကမှင်ဖျက်ရာတွင်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်း လက်မှာပေနေတဲ့ မှင်ကို ဖျက်ရာမှာ လည်း ငှက်ပျောသီးအခွံကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ရေနဲ့ဆေးဖို့တော့ မမေ့နဲ့နော်။
← မလေးရှားနဲ့ ပွဲအတွက် ၀ှက်ဖဲ ရှိသေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ မြန်မာယူ – ၁၈ နည်းပြ ဘန်လာဘီ
ပြည်​​ခိုင်​ဖြိုးပါတီ ဗဟိုအတွင်း​ရေးမှူးနှင့်​အဖွဲ့များ သင်​တန်းဖွင့်​ပွဲအခမ်းအနားတက်​​ရောက်​ →